Himalaya Dainik » अष्ट्रेलियामा २ नेपाली किन परे पक्राउ ? यस्तो छ नालीबेली
अष्ट्रेलियामा २ नेपाली किन परे पक्राउ ? यस्तो छ नालीबेली
एजेन्सी, अष्ट्रेलियामा ठगी गरेको आरोपमा २ नेपाली प’क्राउ परेका छन् । उनीहरु सिड्नीमा बस्ने ८५ वर्षीया वृद्धालाई ठगी गरेको आरोपमा समातिएका हुन् ।
प’क्राउ परेका नेपालीहरुलाई अनुसन्धानबाट अन्तरदेशीय ठगहरुको गिरोहमा आबद्ध
जो उनीहरु अष्ट्रेलियामा बसेर भारतबाट सञ्चालित रहेको खुलेको छ । ती वृद्धाजस्तै अन्य टेलिफोनको सम्पर्कमा आएका अन्य धेरै स्थानीय अष्ट्रेलियन रहेको प्रहरी अनुसन्धानले भेटाएको छ ।